'Mr. I-Robot 'Recap 2 × 06: ILizwi phezulu ngolwesiThathu | - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa 'Mr. Robot 'Ukuphindaphinda 2 × 06: ILizwi phezulu ngoLwesithathu
'Mr. Robot 'Ukuphindaphinda 2 × 06: ILizwi phezulu ngoLwesithathu
Oku okwethutyana. Besisoloko sinendawo esiya kuyo
Ngexesha lokusasaza kunye nolwaneliseko lwengxelo kwangoko, kunzima ukuqikelela apho umboniso uyakuhamba khona xa ulinde iveki epheleleyo phakathi kwezavenge. Ngokukodwa kwimiboniso enzima ngasekhohlo Mnu Robot, ngakumbi ngakumbi Ukulandela isiqendu esasiquka uMkhosi oMnyama oqhuba igazi, ukuphazamisa ukudubula kwabantu, u-Angela esebenzisana ne-FSociety ukuba angene kwi-FBI ngokwayo kunye no-Elliot, emhlabeni, ukukhutshwa kuye liqela labathengisi abamnyama beemarike .
Ngale nto ithethwayo, ndingatsho ngokuzithemba okukhulu ukuba ulixoki ukuba uthe waxela kwangaphambili oku:
Ukuba uyithiyile, wagcuma de sabuya ukuza kuthi ga ngoku noElliot ebekwe ebhedini esibhedlele… ndiyayifumana. Ngeendlela ezininzi oku bekukho Mnu Robot ngokubi kakhulu. Kwakunomdla, kwaye kusetyenziswa i-gimmick eyenzelwe ukuba ibe yingxoxo ye-tad ende kakhulu. Kuthathe indawo, umbono, kwaye wawurhuqa kanye ukuya kumda we IQela lokuzibulala amanqanaba okuzama kakhulu.
Kodwa, njengendawo yokulwa, I-ALF SIQALELE NGAPHAMBI KWE-GIDEON GODDARD NGEMOTO. Kwakukho nje amaxesha amaninzi amakhulu, amancinci afakwe phakathi kokungenangqondo kwayo yonke le nto andinakukunceda kodwa ndiyithande. UTyrell Wellick, ongaziwa ukuba uphi kanye kanye, ebaleka esiqwini ekhwaza Nceda! NdingusoMashishini! Usomashishini obaluleke kakhulu ? Yiza.
Kwaye yasebenza kwinqanaba elingaphezulu kolonwabo olusulungekileyo lwe-visceral oluziswe nguChristian Slater kwihempe yaseHawaii, ngokunjalo, enkosi kwimizamo kaRami Malek. Ukuncedwa kungabikho nxalenye incinci ngamehlo ophawu lwentengiso, uMaleki wayidlala yonke le nto ngathi ngusomajukujuku olahlekileyo ohamba ngaphaya komphezulu weMars okokuqala, elumkele yonke into, eyaziwayo okanye engaziwayo. Yena ngokucacileyo Uyazi ukuba ayilunganga. Thina ngokucacileyo uyazi ukuba le ayilunganga. Kodwa isekwe kwindawo eqheleke kakhulu kuninzi lwethu- ubuncinci, abo bethu bazalwa ngaphambi kuka-1998- eyenza amaxesha asele ekho, amaxesha anje ngomama ka-Elliot ebetha uDarlene, okanye uMnumzana Robot ebulala uTyrell ngentsimbi, kwaye ibenza ukuba baphazamise ngakumbi. Libala entsha Iziporho, OKU kukuhlaselwa kobuntwana bethu.
Kwaye konke kubuyela kuloo mvakalelo yobuntwana ekugqibeleni, akunjalo? Njengoko kuvela olu lwakhiwo lwemibala ye-neon ayilodonga olubekwe ngu-Elliot kodwa ikhaka elenziwe nguMnu Robot, ukukhusela uElliot kumanqindi nakwiinyawo zenyani. Ndizama nje ukuthatha ezo nqindi kuwe uxelela uElliot, ngokunokwenzeka kumzuzu wokuqala uMnu.Robot wenza njengoyise ngaphezulu kokubonakala kunye nesandi. Ixesha lesibini lixhalabile ngoku idabi , Umfuziselo (kunye nokudanisa ngokoqobo) womdlalo wechess phakathi kweentshaba ezimbini ngokuchasene ngokupheleleyo, ukuze ubone uElliot enkosi Mnu.Robot ngowona mzuzu uphambili kubo bonke, ubungqina bethu bokuqala bokuba umfana otye umgabho wakhe ukuqhubeka kufutshane- Ukubulala u-Adderall kusenokwenzeka ukuba, ndawo apho, uzikhathalele. UPortia Doubleday njengo-Angela Moss.UMichael Parmalee / Inethiwekhi yaseMelika
Awunakho ukufundisa umntu ukuba azame ngolunye usuku.
Kwaye ngoku, heist.
Ndiyithandile inkqubela phambili kwisiqingatha sika-Angela kunye no-Darlene sika-FBI-hacking kwesi siqendu mhlawumbi ngaphezulu kunokuba bendimthanda uAlf ebetha uGideon Goddard ngemoto, kwaye andinakukugxininisa ngokwaneleyo ukuba ndimthande kangakanani uAlf ebetha uGidion Goddard ngemoto. Kodwa oku kuvakale… ngokwahlukileyo, impefumlo yomoya omtsha. Akukho maqhinga, yinto nje eyenziwe kakuhle, iseti-yesiqwenga esitshintshela kwimvumi ye Gwan ngababandezelekileyo .
Ndimele ndibuze, nangona kunjalo, ukusebenza kwawo wonke umgangatho weearhente ze-FBI ezingamqapheli umntu ojongeka enetyala kakhulu njengo-Angela. Kodwa ndicinga ukuba ikwakhokelela kwityala likaPortia Doubleday, umdlali weqonga onobuchule obumangalisayo bokujonga ukuzola komkhenkce kunye nasecicini lokuhlaselwa kukothuka ngokupheleleyo ngaxeshanye. Ukuba noCarly Chaikin njengelizwi elingapheliyo elithathiweyo entlokweni yakhe yayiliciko nje I-11 yeLwandlekazi Ikhekhe elimilo.
Ikhredithi ku-Esmail, ngokunjalo, ukuthanda kwakhe ukukhangela ixesha elide akukhange kubekiwe ukwamkelwa (okwangoku), kuba azikaze zisetyenziselwe injongo enye. Apho kule veki iphelileyo ikhamera yayihlala noDom DiPierro kuyo yonke into yokubulawa kwabantu ebumnyameni ukuze benze uloyiko olwahlukileyo phakathi kwesiphithiphithi, nantsi yavelisa imeko yongxamiseko, indlela Indoda yentaka yaqaqambisa inkqubo exakekileyo yokudibanisa intsebenzo. Ngandlela-thile, u-Angela wenza into efanayo.
Kuthatha kuphela ikhadi lasendle elinye ukutshabalalisa eyona mveliso iphambili, nangona kunjalo, kwaye iAgent Dom DiPierro ngokusisiseko yinkcazo yegama. Uphazamisa ezona zicwangciso zibalaseleyo zika-Angela ngoncumo olunobuhlobo olunokuthi luthethe enye yezinto eziliwaka, phantse akukho nanye kubo elungileyo ku-Angela. Indoda yentaka ? Hayi, le ntaka iphekiwe * landa umkhondo wokuhleka kunye nehlombe *
Ukuba utata wayendixelele, ngelo xesha, ukuba ndibize ishishini lakhe ngento yokuqala eyangena entlokweni yam, utata ngewayengumnini webhongo kunye nomqhubi weThe Legend of Zelda Presents Batman's Boob Factory.
Omnye umba ophambili ngokuvulwa kwe-sitcom, ngakumbi amaxesha u-Elliot aphulukene nokuphola kwakhe (Yonele le [bleep]!), Kukuba ibonakalise kuphela ukuba lincinci kangakanani eli xesha livumele uRami Malek ukuba akhanye. Aye abakho amaxesha (ukungaphili kwakhe, uhleko lokoyisa kwi-premiere kuye kuthi qatha engqondweni) kodwa kufuneka siphume uElliot ebhedini kwaye ashiye phantsi kancinci kancinci.
Kuyinto entle ukwazi ukuba nakwi-FBI, eli lizwe liphezulu, nelona ziko lokunyanzeliswa komthetho, kusekho iidick eziza kucela umfazi ukuba asele kanye njengoko eshiya igumbi lokuhlambela.
Yima, khumbula xa uAlf wagidima uGidion Goddard ngaphaya kwemoto yakhe?
Hayi, iDisney ayicimi i 'Star Wars' ngokulandelelana kweTrilogy
Imfihlakalo eNkulu engasombululekiyo yeNixon: Ngaba wayalela ukuNgena kwaManzi?
Ngaba uBiden okanye uWarren baya kungena kwiphulo likamongameli emva kwexesha?
indlela yokubuyisela umntu ebomini
ukuphakama kwesaqhwithi kubanzi
UJayden k smith we-facebook
ubizwa ntoni ugqirha wamatyhalarha
UMichael Cooper New York Times